Ọ̀ Bụ Ihe Ọjọọ ma M Jiri Ekwentị Zigara Mmadụ Ozi? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
:-) I nwere ike izigara ndị enyi gị na ndị ọzọ ozi iji mara otú ha mere.
:-( Ma, ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ozi i zigaara mmadụ nwere ike ime ka gị na ya see. O nwekwara ike ime ka i nwee aha ọjọọ.
Isiokwu a ga-enyere gị aka ịma:
Onye i kwesịrị izigara ozi
Ụdị ozi i nwere ike izigara mmadụ
Mgbe i kwesịrị izigara mmadụ ozi
Ihe ndị ị ga-eme
Ajụjụ ndị ị ga-aza
Ọtụtụ ndị na-eto eto anaghị eji izigara mmadụ ozi egwu egwu. Ọ bụ ụzọ ha na ndị enyi ha na-esi ekwurịta okwu ma ọ bụrụ na papa ha na mama ha akwado ya.
Ezenwaanyị kwuru, sị: “Papa m anaghị ekwe ka mụ na nwanne m nwaanyị na ụmụ okorobịa na-ekwu okwu n’ekwentị. Anyị chọọ ka anyị na ha kwuo okwu, anyị na-eji fon nkịtị. Anyị na-anọkwa n’ebe ndị ọzọ ga na-anụ ihe anyị na ha na-ekwu.
Ihe i kwesịrị ịma: Ọ bụrụ na ị na-enye onye ọ bụla ị hụrụ nọmba ekwentị gị, o nwere ike itinye gị ná nsogbu.
Ikenna kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị na-enye onye ọ bụla ị hụrụ nọmba ekwentị gị, i nwere ike ịna-enweta ozi na foto ndị na-adịghị mma.”
Izundu kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị na-ezigara onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị ozi mgbe niile, ọ gaghị ara ahụ́ onye ahụ erie gị obi.”
Baịbụl kwuru, sị: “ Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo. ” (Ilu 22:3) Ọ ga-ara ahụ́ gị abaa ná nsogbu ma ọ bụrụ na ị naghị ezigakarịrị onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị ozi n’ekwentị.
Ihe mere eme: Ojiugo kwuru, sị: “ O nwere otu nwa okorobịa mụ na ya dị ná mma. Ọ na-ezitekarịrị m ozi, mụ ana-ezigakwara ya. N’obi m, ọ bụ naanị enyi ka anyị bụ. Ma, amaghị m na o bu ihe ọzọ n’obi. Ọ bụ mgbe ọ gwara m na ya hụrụ m n’anya ka anya mepere m. Asị na m maara, mụ na ya agaraghị na-akpa, agakwaraghị m na-ezigara ya ozi mgbe niile. ”
Ihe ị ga-echebara echiche: Gịnị ka i chere Ojiugo kwesịrị ime ugbu a nwatakịrị nwoke ahụ gwara ya ihe o bu n’obi?
Tupu ihe ahụ emee, Olee ihe Ojiugo gaara eme ka nwa okorobịa ahụ ghara ichewe ihe ọzọ n’obi?
Izigara mmadụ ozi anaghị ara ahụ́. Obi na-adịkwa mmadụ mma ma e zitere ya ozi. Ma, onye anyị zigaara ozi nwere ike ịghọtahie ihe anyị dere.
Ihe i kwesịrị ịma: Ndị mmadụ nwere ike ịghọtahie ozi i zigaara ha n’ekwentị.
Uchechi kwuru, sị: “Ị gaghị ejili ozi mmadụ ziteere gị mara otú obi ya dị, ọ bụrụgodị na o ziteere gị ihe e sere ese. O nwere ike isere gị na ya okwu.”
Ulooma sịrị: “Ahụla m ụmụ agbọghọ a sị na ha na-achụ ụmụ nwoke naanị maka ihe ha zigaara ụmụ okorobịa.”
Baịbụl kwuru, sị: “ Onye ezi omume na-atụgharị uche iji zaa okwu. ” (Ilu 15:28) Ihe amaokwu Baịbụl a na-ekwu bụ na i kwesịrị ịgụgharị ihe i dere tupu gị ezigawara ya mmadụ.
Ọ bụ gị kwesịrị iji aka gị ekpebi mgbe ị ga-ezigara mmadụ ozi na mgbe ị na-agaghị ezigara ya.
Ihe i kwesịrị ịma: Ọ bụrụ na ị na-ezigara ndị mmadụ ozi mgbe ọ bụla dị gị mma, o nwere ike ime ka ha chewe na àgwà gị adịghị mma. O nwekwara ike ime ka ndị enyi gị na-agbara gị ọsọ.
Adanta kwuru, sị: “Ọ naghị ara ahụ́ mụ echefuo na ọ bụghị mgbe niile ka m kwesịrị izigara ndị mmadụ ozi. Ọ na-abụ mụ na mmadụ na-ekwu okwu ma ọ bụkwanụ na-eri nri, mụ ana-ezigara mmadụ ozi.”
Akuudo kwuru, sị: “Mmadụ ekwesịghị ịna-ezigara onye ọzọ ozi mgbe ọ na-anya ụgbọala. Ọ bụrụ na i wepụtụ anya chọọ ide ihe, i nwere ike inwe ihe mberede okporo ụzọ.”
Baịbụl kwuru, sị: “ E nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla, . . . oge ịgbachi nkịtị na oge ikwu okwu. ” (Ekliziastis 3:1, 7) Ihe a Baịbụl kwuru gbasakwara izigara mmadụ ozi.
;-) Na-eme ihe papa gị na mama gị gwara gị mee.—Ndị Kọlọsi 3:20.
;-) Ọ bụghị onye ọ bụla ị hụrụ gị enye ya nọmba ekwentị gị. Ọ bụrụ na gị amụta otú ị ga-esi na-ewetu obi ala gwa mmadụ na ị gaghị enye ya nọmba ekwentị gị, ọ ga-abara gị uru ma ị ghọọ dimkpa.
;-) Ezigarala mmadụ ozi ga-eme ka o chewe na ị na-achụ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ erie gị obi, ọ ga-eme ka obi gbawaa gị.
Uchechi kwukwara, sị: “Papa m na mama m ma na m na-akpachara anya mgbe m na-ezigara mmadụ ozi. Ha ma na agaghị m ana ndị àgwà ha na-adịghị mma nọmba ekwentị ha.”
;-) Tupu gị edewe ozi ị chọrọ izigara mmadụ, jụọ onwe gị ma ọ̀ bụ izigara onye ahụ ozi ga-aka mma. O nwere ike ịka mma ka ị kpọọ onye ahụ n’ekwentị ma ọ bụkwanụ gaa hụ ya ihu na ihu.
;-) Ezigarala mmadụ ihe ị ma na ị gaghị agwa ya ma unu nọrọ ihu na ihu. O nwere otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na atọ. Aha ya bụ Ugomma. Ọ sịrị: “ Ọ bụrụ na ị gaghị agwali mmadụ ihe ị chọrọ izigara ya, ezigarala ya ihe ahụ. ”
Emeka kwuru, sị: “Agbachịla nkịtị ma mmadụ zitere gị foto na-adịghị mma. Gwa ya papa gị na mama gị. Ọ ga-eme ka ị ghara ịba ná nsogbu, meekwa ka ha tụkwasị gị obi.”
;-) Kpebie mgbe ị ga na-eji ekwentị gị na mgbe ị na-agaghị eji ya. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Nneka kwuru, sị: “ Anaghị m eji ekwentị m mgbe m na-eri nri ma ọ bụ mgbe m na-amụ ihe. M na-agbanyụkwa ya ma m gaa ọmụmụ ihe. Ihe mere m ji agbanyụ ya bụ ka m ghara ịpịgharịwa ya ma mmadụ zitere m ozi. ”
;-) Na-echebara ndị ọzọ echiche. (Ndị Filipaị 2:4) Ọ bụghị gị na mmadụ na-ekwu okwu, gị ana-ezigara onye ọzọ ozi.
Adaugo kwuru, sị: “Ekpebiri m na m gaghị na-ezigara mmadụ ozi ma mụ na ndị enyi m nọrọ, ọ gwụkwala ma ihe m chọrọ ịgwa ya ọ̀ dị oké mkpa. Anaghịkwa m enye ndị m na-amachaghị nọmba ekwentị m.”
Ihe atụ nke mbụ
Gị na nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọ akpaala ọnwa isii, gị abịazie chọpụta na ị gaghị alụli ya. Olee ihe ị ga-ezigara ya?
“Gawara onwe gị.”
“O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Olee mgbe anyị ga-ahụ?”
Azịza ya bụ: B. Ọ ga-aka mma ka gị na mmadụ kwurịta ụdị okwu a ihu na ihu n’ihi na ọ bụghị obere okwu.—Luk 6:31.
Ihe atụ nke abụọ
Gịnị ka ị ga-eme ma e zitere gị foto nwa akwụkwọ unu, gị emepee ya chọpụta na ọ gba ọtọ?
Kachapụ ya n’ekwentị gị ozugbo.
Zigara ya ndị enyi gị niile.
Azịza ya bụ: A. Ile foto ndị gba ọtọ adịghị mma. Ọ na-emebi ma aha onye zitere ya ezite ma aha onye e zigaara ya. Gbuo ya ozugbo ma e zitere gị ya.—Ndị Efesọs 5:3, 4.
Ihe atụ nke atọ
Gịnị ka ị ga-eme ma mmadụ zitere gị ozi oge unu na-eri nri n’ụlọ unu?
Imeghe ozi ahụ n’ihi na i chere na ha ga-aghọta na mmadụ ziteere gị ozi.
Ịhapụ ya unu richaa nri gị emeghee ya.
Azịza ya bụ: B. Ndị ezinụlọ gị ka ozi ahụ mkpa. I nwere ike ịhapụ ya unu erichaa nri, ọ gaghị agba ọsọ.—Ndị Filipaị 1:10.